XOG: Afarta Xiddig Ee Ay Liverpool Kooxdeeda Ka Dirayso & Shanta Saxeexooda Lala Xidhiidhinayo - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaXOG: Afarta Xiddig Ee Ay Liverpool Kooxdeeda Ka Dirayso & Shanta Saxeexooda Lala Xidhiidhinayo
XOG: Afarta Xiddig Ee Ay Liverpool Kooxdeeda Ka Dirayso & Shanta Saxeexooda Lala Xidhiidhinayo
Tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa leh qorshayaal ay doonayso inay fuliso xagaagan waxaana kamid ah tiro ciyaaryahano ah oo ay doonayso inay ka dirto Anfield iyo kuwo ay doonayso inay lasoo saxeexato.
Reds ayaa xiddigaha ilaa haatan lala xidhiidhinayo laga xusi karaa Youri Tielemans, Saul Niguez, Renato Sanches, Kingsley Coman iyo Kylian Mbappe.
Liverpool ayaa deg-deg u samaysay saxeexeedii ugu horreeyay ee xagaaga waxaana ay ka dhigatay daafac French-ka ah ee Ibrahima Konate oo ay 35 Milyan oo pound kagala soo wareegtay RB Leipzig.
Sida ay xogo cusubi sheegayaan, Liverpool ayaa haatan u baahan inay ciyaartoy iska iibiso si ay saxeexyo cusub u samayso, sida uu sheegayo wargeyska The Athletic kooxda ka ciyaarta gobolka Merseyside ayaa afar xiddig ka samayn karta lacag 53 Milyan oo pound ah.
Xiddiga koowaad ayaa ah Harry Wilson oo ay 15 Milyan oo pound iibkiisa ku doonayso Liverpool, xiddiga Welsh-ka ah oo amaaho ugu soo ciyaaray Derby County, Bournemouth iyo Cardiff ayaa lala xidhiidhinayaa haatan Benfica iyo Brentford.
Xiddiga labaad ayaa ah daafaca midig ee Neco Williams oo ay iibkiisa Reds 10 Milyan oo pound ku rabaan, xiddigaas Welsh-ka ah oo boos ka waayay Trent Alexander Arnold ayaa gudaha Premier League u dhaqaaqi kara.
Xiddiga saddexaad ayaa ah 29 sano jirka ree Switzerland oo ay Liverpool ku qiimaynayso 13 Milyan oo pound, Shaqiri ayaa haddiiba uu da’yarka Harvey Elliot kooxda sii joogo xulashada kaga dambayn kara waxaana lala xidhiidhinayaa Lazio.
Ugu dambayn xiddiga afraad ayaa ah Marco Grujic, 25 sano jirka Serbian-ka ah oo amaah kaga soo laabtay FC Porto ayaa lala xidhiidhinayaa kooxda Sassuolo oo u doonaysa bedelka Manuel Locatelli.